Pralidoxime - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Pralidoxime
Generic Name: Pralidoxime Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Pralidoxime ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Pralidoxime ကိုဓါတ်ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ anticholinesterase agents တွေ(ဥပမာ organophosphatepesticidesတွေဖြစ်တဲ့parathion,“nervegas”ဥပမာsarin နဲ့အခြားnerveagentsတွေဥပမာ VX)ကြောင့်ဖြစ်တဲ့nerve agentအဆိပ်သင့်မှုကိုကုသဖို့အတွက်atropineနဲ့တွဲသုံးပါတယ်။Pralidoximeဟာအာရုံကြောတွေကြွက်သားတွေကလိုအပ်တဲ့သဘာဝပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့cholinesteraseကိုပုံမှန်အတိုင်းပြန်အလုပ်လုပ်နိုင်အောင်ပြုလုပ်ပေးပါတယ်။nerve agent အဆိပ်သင့်ခြင်းရဲ့ရောဂါလက္ခဏာတွေကတော့အသက်ရှူရခက်ခဲခင်း၊ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊နှာစေးခြင်း၊သွားရည်များကျခြင်း၊အမြင်အာရုံများပြောင်းလဲခြင်း၊ချွေးထွက်ခြင်း၊ဗိုက်နာခြင်း၊ပျို့ခြင်း၊အန်ခြင်း၊ဝမ်းလျှောခြင်း၊ကြွက်သားများတင်းခြင်း၊အိပ်ငိုက်ခြင်း၊စိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်းနဲ့တက်ခြင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်။
Pralidoximeဟာကြွက်သားများ(အသက်ရှူခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ကြွက်သားတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်)အပေါ်မှာအဓိကသက်ရောက်မှုရှိပြီးကြွက်သားများတင်းတောင့်ခြင်း၊ကြွက်တက်ခြင်း၊အားနည်းခြင်းနဲ့လေဖြတ်ခြင်းတို့ကိုလျှော့ချပေးပါတယ်။ နောက်ဆေးတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့atropineကိုတော့အဲဒီအရာတွေအပြင်nerve agent အဆိပ်သင့်ခြင်းရဲ့အခြားလက္ခဏာတွေဖြစ်တဲ့အသက်ရှူနှေးခြင်း၊အသက်ရှူရင်တစ်ရွှီရွှီအသံကြားရခြင်း၊ချွေးပိုထွက်ခြင်း၊တံတွေးများပိုထွက်ခြင်း၊ဗိုက်အောင့်ခြင်း၊အန်ခြင်းနဲ့ဝမ်းလျှောခြင်းတို့ကိုကုသဖို့အတွက်သုံးပါတယ်။
Pralidoximeကိုကြွက်သားထဲသို့တိုက်ရိုက်ထိုးပေးခြင်း၊အရေပြားအောက်သို့ထိုးခြင်းနဲ့သွေးပြန်ကြောတစ်လျှောက်ထိုးခြင်းတို့ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်သူတစ်ဦးကသင့်ကိုဆေးထိုးပေးပါလိမ့်မယ်။Pralidoxime ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းပေးရပါမယ်။IV ဆေးထိုးခြင်းပြီးဖို့အတွက်မိနစ်၃၀လောက်ကြာနိုင်ပါတယ်။
ဆေးကို25°C(77°F) အပူချိန်မှာထားပါ။15-30°C(59-86°F)အပူချိန်မှာလည်းထားလို့ရပါတယ်။ ဆေးကိုခဲမသွားအောင်ထားပါ။
Pralidoximeအမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီးဆေးထိန်းသိမ်းပုံလိုအပ်ချက်လည်းကွာခြားနိုင်ပါတယ်။ ဆေးကိုသိမ်းဆည်းဖို့အတွက်ဆေးထုပ်ပေါ်မှာရှိတဲ့ညွှန်ကြားချက်များကိုဖတ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ်သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကိုလည်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။ ကလေးတွေနဲ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်တွေဘေးကင်းဖို့အတွက်ဆေးကိုသူတို့နဲ့ဝေးရာမှာထားသင့်ပါတယ်။
Pralidoximeကိုအိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေဆေးချတာမျိုးကိုမလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါဒါမှမဟုတ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာစနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကိုစနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Pralidoxime အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
Pralidoxime ကိုအသုံးမပြုခင်သင့်မှာယခုဆေးနဲ့ဓါတ်မတည့်တာသို့မဟုတ်အခြားဓါတ်မတည့်တာမျိုးတွေရှိရင်သင့်ရဲ့ဆရာဝန်သို့မဟုတ်ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုပြောပြပါ။ ယခုဆေးမှာဆေးနဲ့ဓါတ်မတည့်တာတွေသို့မဟုတ်တခြားဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်စေနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေပါတတ်ပါတယ်။ အသေးစိတ်အတွက်သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုပြောပြပါ။
ယခုဆေးကိုအသုံးမပြုခင်ဆရာဝန်သို့မဟုတ်ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုသင့်ရဲ့ရောဂါရာဇဝင်အထူးသဖြင့်ကျောက်ကပ်ရောဂါ၊အာရုံကြောနဲ့ကြွက်သားရောဂါတစ်ခုခု(ဥပမာ myasthenia gravis)တို့အကြောင်းကိုပြောပြပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Pralidoxime ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
ယခုဆေးဝါးကိုကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန်နှင့်ကလေးနို့တိုက်နေချိန်တွင်အသုံးပြုလျှင်ဆိုးကျိုးများရှိမရှိကိုဆုံးဖြတ်နိုင်ရန်အတွက်လုံလောက်သောလေ့လာစမ်းသပ်ချက်များမရှိပါ။ ဆေးမသောက်သုံးမီတွင်ဖြစ်နိုင်ချေကောင်းကျိုးများနှင့်ဆိုးကျိုးများအားလုံးကိုချိန်ဆနိုင်ရန်အတွက်သင့်ရဲ့ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ပါ။ အမေရိကန်နိုင်ငံအစားအသောက်နဲ့ဆေးဝါးစီမံကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့(FDA)ကPralidoximeကိုကိုယ်ဝန်ဆောင်နေစဉ်ဆိုးကျိုးရနိုင်ခြေအဆင့်Nလို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
Pralidoxime ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
မူးဝေခြင်း၊အိပ်ငိုက်ခြင်းသို့မဟုတ်ဆေးထိုးတဲ့နေရာမှနာကျင်ခြင်းတို့ခံစားရနိုင်ပါတယ်။atropine ကြောင့်ပုံမှန်ရတတ်တဲ့ဆိုးကျိုးတွေကတော့ မျက်နှာနီမြန်းခြင်း၊သူငယ်အိမ်ကြီးခြင်း၊နှလုံးခုန်မြန်ခြင်းနဲ့ခံတွင်းခြောက်ခြင်း၊နှာခေါင်းခြောက်ခြင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်။ ချင်းပြောပြပါ။
ဘယ်ဆေးတွေက Pralidoxime နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Pralidoximeကသင်လက်ရှိသောက်နေတဲ့အခြားဆေးတွေနဲ့ဓါတ်ပြုပြီးဆေးရဲ့ထိရောက်မှုနဲ့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးရနိုင်ခြေကိုပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကိုလုပ်ထားပြီး(စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊မညွှန်ကြားဘဲသောက်သုံးနေတာတွေ၊သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်)ဆရာဝန်ဒါမှမဟုတ်ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကိုအမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကိုဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲသောက်သုံးခြင်း၊ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Pralidoxime နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Pralidoxime နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Pralidoxime ဟာသင့်ရဲ့နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကိုပိုဆိုးသွားစေတာဒါမှမဟုတ်ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်သင့်ရဲ့လက်ရှိကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကိုသင့်ရဲ့ဆရာဝန်ဒါမှမဟုတ်ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကိုအသိပေးဖို့အရေးကြီးပါတယ်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Pralidoxime ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ပထမဆုံးအကြိမ်:ဆေး၁ဂရမ်မှ၂ဂရမ်ကိုnormal saline 100mLနဲ့ရောဖျော်ပြီး၁၅မိနစ်မှမိနစ်၃၀အထိကြာအောင်IV သွင်းပါ။ အကယ်၍ဆေးသွင်းခြင်းပြုလုပ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ရင်သို့မဟုတ်အဆုတ်ထဲတွင်ရေဝင်သောရောဂါရှိပါကဆေးကိုထိုးဆေးအနေနဲ့ပေးပါ။ ဆေးကိုရေသန့်နှင့်50mg/mLရအောင်ဖျော်ပြီးဖြည်းဖြည်းချင်းထိုးပါ။(အနည်းဆုံး၅မိနစ်ကြာအောင်)
-အဆိပ်နဲ့အရေပြားထိတွေ့မှုဖြစ်ပေါ်လာပါကအဝတ်အစားများကိုချွတ်ပြီးအရေပြားနဲ့အမွှေးအမျှင်တွေကိုsodium bicarbonate သို့မဟုတ်အရက်ဖြင့်သေချာဆေးကြောပါ။
-လူနာရဲ့အောက်ဆီဂျင်ပမာဏပြန်များလာပါကatropineကိုဖြစ်နိုင်သမျှချက်ချင်းပေးပါ၊လူနာမှာအောက်ဆီဂျင်ပမာဏကျနေပါကatropineကိုမပေးပါနဲ့။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်atropineကြောင့် ventricular fibrillation လို့ခေါ်တဲ့နှလုံးခုန်စည်းချက်မမှန်တဲ့အခြေအနေရနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
-atropine ဆေးပမာဏအချို့ကိုအနည်းဆုံး၄၈နာရီကြာတဲ့အထိဆက်ပေးထားပါ။ သွေးထဲမှာcholinesterase ရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်ပြန်ကောင်းလာတဲ့အထိဆက်ပေးပါ။
အသုံးပြုခြင်းများ:ပိုးသတ်ဆေးတွေကြောင့်နဲ့cholinesteraseကိုတားတဲ့ဂုဏ်သတ္တိရှိသောဓါတ်ပစ္စည်းတွေ(ဥပမာ nerve gas)ဖြစ်တဲ့organophosphateတွေကြောင့်ဖြစ်တဲ့အဆိပ်သင့်မှုတွေမှာဖြေဆေးအဖြစ်အသုံးပြုပါတယ်။
Nerve agent အဆိပ်သင့်ခြင်းအတွက်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအသုံးပြုရန်ဆေးပမာဏ
ပထမဆုံးအကြိမ်:ဆေး၁ဂရမ်မှ၂ဂရမ်ကိုnormalsaline100mLနဲ့ရောဖျော်ပြီး၁၅မိနစ်မှမိနစ်၃၀အထိကြာအောင်IVသွင်းပါ။ အကယ်၍ဆေးသွင်းခြင်းပြုလုပ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ရင်သို့မဟုတ်အဆုတ်ထဲတွင်ရေဝင်သောရောဂါရှိပါကဆေးကိုထိုးဆေးအနေနဲ့ပေးပါ။ ဆေးကိုရေသန့်နှင့်50mg/mLရအောင်ဖျော်ပြီးဖြည်းဖြည်းချင်းထိုးပါ။(အနည်းဆုံး၅မိနစ်ကြာအောင်)
အသုံးပြုခြင်းများ:anticholinesteraseဆေးတွေဖြစ်တဲ့neostigmine,pyridostigmineနဲ့ambenoniumတို့ဆေးလွန်ခြင်းကိုထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်သုံးပါတယ်။myasthenia gravis လို့ခေါ်တဲ့နာတာရှည်ကြွက်သားနဲ့အာရုံကြောအားနည်းခြင်းရောဂါမှာသုံးပါတယ်။
-nerve agent နဲ့ပိုးသတ်ဆေးအဆိပ်သင့်ခြင်းလက္ခဏာများ
-nerve agent အဆိပ်သင့်ခြင်းရဲ့အောက်ပါလက္ခဏာတွေအချို့သို့မဟုတ်အားလုံးရှိနေခြင်း
ကလေးတွေအတွက် Pralidoxime ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
ပထမဆုံးအကြိမ်အတွက်ဆေးပမာဏ:ဆေး20မှ50mg/kg (အမြင့်ဆုံး 2000mg/dose)ကို10 မှ20mg/mL ဖျော်ရည်ရအောင်ပြုလုပ်ပြီး၁၅မိနစ်မှမိနစ်၃၀ကြာအောင်IVပေးပါ။
Nerve agent အဆိပ်သင့်ခြင်းအတွက်ကလေးအသုံးပြုရန်ဆေးပမာဏ
Pralidoximeဆေးကိုသောက်ဖို့လွတ်သွားခဲ့ပါက(မေ့ခဲ့ပါက)သတိရတဲ့အချိန်မှာအမြန်ဆုံးသောက်ပါ။ သို့သော်လည်းနောက်တစ်ကြိမ်ဆေးသောက်ရမယ့်အချိန်နဲ့နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကိုကျော်ပြီးပုံမှန်အချိန်မှာပဲသောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကိုနှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
Pralidoxime Dosage. https://www.drugs.com/dosage/pralidoxime.html. Accessed April 9, 2018.
Pralidoxime CHLORIDE Pen Injector. https://www.webmd.com/drugs/2/drug-148128/pralidoxime-intramuscular/details. Accessed April 9, 2018.